लक्ष्मी बैंकको युरो कप योजना : ‘मोबाइल मनी–प्रेडिक्ट एन्ड विन !’
काठमाण्डौ । यस वर्ष आयोजना भइरहेको युरो कप २०२१ को सुरुआतसँगै फुटबलका फ्यानहरुमा मात्र नभई अन्य सर्वसाधारणमा समेत यसको उमङ छाएको देख्न सकिन्छ। यो उमंगमा अझ बढी उत्साह थप्न लक्ष्मी बैंकले एफ–वान सफटसँग मिली मोबाइल मनी–प्रेडिक्ट एन्ड विन !’ योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ। यो योजना युरो कप २०२१ सुरु भएको दिनदेखि अर्थात जुन ११ देखि...
लक्ष्मी बैंकको API Banking मा आधारित ‘LxBConnect’ मा साझेदारीको आह्वान
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंकले API Banking का माध्यमबाट डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढाउने रणनीतिबमोजिम ‘LxBConnect’ नामक API Developer प्लाटफर्म घोषणा गरी साझेदारीका लागि आह्वान गरेको छ। यस साझेदारीअन्तर्गत फिन्टेक, स्टार्टअप तथा डेभलपरहरुले आफ्नो क्षेत्रसँग सम्बन्धित बैंकका साझा ग्राहकलाई विविध डिजिटल सेवा प्रदान गर्न सक्नेछन्। LxBConnect Sandbox&...
सिन्धुलीको रामटारमा लक्ष्मी बैंकको १२९ औँ शाखा सञ्चालनमा
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंकले आफ्नो शाखा सञ्जाल विस्तार गर्ने क्रममा १२९ औँ शाखा सिन्धुली जिल्लाको सुनकोशी गाउँपालिकाको रामटारमा सञ्चालनमा ल्याएकोे छ। यो शाखामार्फत बैकंले ग्राहकको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न आवश्यक सम्पूर्ण रिटेल बैकिङ सेवाका साथै साना तथा लघु व्यवसायीमाझ वित्तीय पहुँच पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। यो नयाँ शाखाका...
लक्ष्मी बैंकको नयाँ वर्ष अफर : अरेन्ज सेभिङ्स प्लस खातामा यस्ता छन् आकर्षक सुविधाहरु
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंकको प्रिमियम बचत खाता ‘अरेन्ज सेभिङ्स प्लस’ बाट ग्राहकले अब ४.५% वार्षिक ब्याजदरका साथै थप आकर्षक सुविधाहरू प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यो खाता भएका ग्राहकले रु. १ लाखसम्मको वार्षिक स्वास्थ्य बीमा र रु. १० लाखसम्मको दुर्घटना मृत्युु÷अक्षमता बीमा सुविधा पाउन सक्नेछन्। यतिमात्र नभएर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड र...
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंकले आफ्नो शाखा सञ्जाल विस्तार गर्ने क्रममा आफ्नो १२८ औँ शाखा कास्की जिल्लाको लेखनाथमा सञ्चालनमा ल्याएकोे छ। पोखरा महानगरपालिकाको लेखनाथ (तालचोक) मा रहेको यो शाखामार्फत बैकंले ग्राहकको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न आवश्यक सम्पूर्ण रिटेल बैंकिङ सेवाका साथै साना तथा लघु व्यवसायीहरुमाझ वित्तीय पहुँच...
लक्ष्मी बैंकद्वारा वित्तीय साक्षरतासँगै १ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीलाई खुत्रुके वितरण
काठमाण्डौ । विश्व वित्तीय सप्ताह (ग्लोबल मनि विक) २०२१ को उपलक्ष्यमा लक्ष्मी बैंकले विभिन्न कार्यक्रमहरु सम्पन्न गरेको छ। बैंकको वित्तीय साक्षरता आभियानअन्तर्गत सातै प्रदेशका विभिन्न विद्यालयका १ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीलाई सामान्य वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी कक्षा सञ्चालन गरी बचतको महत्व बुझाउँदै खुत्रुके वितरण गरिएको थियो।...
महोत्तरीको सरपल्लोमा लक्ष्मी बैंकको १२७ औँ शाखा
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंकले आफ्नो शाखा सञ्जाल विस्तार गर्ने क्रममा आफ्नो १२७ औँ शाखा महोत्तरी जिल्लाको सरपल्लो गाउँपालिकामा सञ्चालनमा ल्याएको छ। यो शाखामार्फत बैंकले ग्राहकको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न आवश्यक सम्पूर्ण रिटेल बैंकिङ सेवाका साथै साना तथा लघु व्यवसायीमाझ वित्तीय पहुँच पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। यो नयाँ शाखाका...
लक्ष्मी बैंकको अगुवाइमा माथिल्लो पिलुवा खोला–३ जलविद्युतमा रु. ९३.७० करोड कर्जा लगानी गरिने
काठमाण्डौ । माबिलुङ्ग इनर्जी लिमिटेडले संखुवासभा जिल्लाको साविकको सिद्धकाली र मावादिन गाविसहरुमा अवस्थित पिलुवा र सिखुवा खोलामा निर्माण गर्ने ४.९५ मेगावाटको माथिल्लो पिलुवा खोला–३ जलविद्युत् आयोजनाका लागि लक्ष्मी बैंकको अगुवाइमा दुई वाणिज्य बैंकहरुले सहवित्तीयकरणअन्तर्गत कर्जा लगानी गर्ने भएको छ। लक्ष्मी बैंक र म�...
लक्ष्मी बैंकले सुरु गर्यो ‘स्मार्टफोन लोन’ सेवा, अब मोबाइल मनी एपबाटै रु. २ लाखसम्म कर्जा लिन सकिने
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंकले एफ–वान सफ्टसँगको सहकार्यमा ‘स्मार्ट फोन लोन’ सेवा सुरु गरेको छ। स्मार्ट फोन लोन एक कर्जारुपी सेवा हो । जसअन्तर्गत योग्य ग्राहकले लक्ष्मी बैंकको मोबाइल मनी एपबाटै अधिकतम २ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा लिन सक्नेछन्। कर्जाको मात्रा ग्राहकको खातामा भएको कारोबारका आधारमा तोकिने र सो गणना एपको एनलाइटिक्स...
सर्लाहीको मलंगवामा लक्ष्मी बैंकको १२६ औँ शाखा
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंकले आफ्नो शाखा सञ्जाल विस्तार गर्ने क्रममा आफ्नो १२६ औँ शाखा सर्लाही जिल्लाको मलंगवामा सञ्चालनमा ल्याएको छ। यो शाखामार्फत बैंकले ग्राहकको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न सम्पूर्ण रिटेल बैंकिङ सेवाका साथै साना तथा लघु व्यवसायीमाझ वित्तीय पहुँच पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। यो नयाँ शाखाका साथ लक्ष्मी बैंकको...
लक्ष्मी बैंकको ‘माई मोबाइल मनी’ भिडियो प्रतियोगिताका विजेताहरु घोषणा
काठमाण्डौ। लक्ष्मी बैंकले आयोजना गरेको ‘माई मोबाइल मनी’ भिडियो प्रतियोगिताको विजेता घोषणा गरेको छ। एक नौलो र फरक प्रकारको यो प्रतियोगिता लक्ष्मी बैंकको दोस्रो ‘क्राउडसोर्सिङ’ प्रतियोगिता हो। यसअघि बैंकले ‘माई कार्ड आइडिया’ नामक प्रतियोगिता आयोजना गरेको थियो। जसमा सहभागीहरुले बैंकको डेबिट कार्डका लागि विभिन्न प्रकारका...
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंक लिमिटेडले लोहत्से बहुउदेश्यीय प्रालिको सहभागितामा बस टिकट बुकिङ सेवाको भुक्तानी गर्न पाउने गरी एक थप सुविधा ल्याएको छ। अब बसको टिकट खरिद गर्दा ग्राहकले मोबाइल मनी÷वालेटबाट क्यूआर स्क्यान गरी फोनपे नेटवर्कअन्तर्गत भुक्तानी गर्न सकिनेछ।क्यूआरद्वारा बस टिकटको भुक्तानी गर्न पाउने सेवा तत्काल काठमाण्डौको...
लक्ष्मी बैंकको वार्षिक साधारणसभाबाट ११.५% लाभांश पारित
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव गरेको लाभांश पारित गर्दै लक्ष्मी बैंक लिमिटेडको २० औँ वार्षिक साधारणसभा आज मंगलबार सम्पन्न भएको छ। बैंकको सभा काठमाण्डौको हात्तीसारस्थित बैंकको प्रधान कार्यालयमा बिहान ११ बजेबाट सुरु भएको थियो। सभाले गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव गरिएको बैंकको चुक्तापुँजीको ९ प्रतिशतले हुन आउने बोनस...
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंकले सोलुखुम्बुको थुलुङ दूधकोशी गाउँपालिकामा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने भएको छ। सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहसम्बन्धी विषयमा लक्ष्मी बैंक र थुलुङ दूधकोशी गाउँपालिकाबीच सम्झौता भएको छ। सम्झौतापत्रमा लक्ष्मी बैंकका रिटेल फाइनान्सियल सर्भिसका प्रमुख दिपेश अमात्य तथा थुलुङ दूधकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष असिम...
लक्ष्मी बैंकले पुस २८ मा डाक्यो वार्षिक साधारणसभा
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंक लिमिटेडले आफ्नो २० औँ वार्षिक साधारणसभाको मिति र स्थान तय गरेको छ। बैंक सञ्चालक समितिको हिजो सोमबार बसेको बैठकले वार्षिक साधारणसभा यही पुस २८ गते आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ। सभा काठमाण्डौ हात्तीसारस्थित बैंकको प्रधान कार्यालयमा भिडियो कन्फ्रेन्सका माध्यमबाट बिहान साढे ११ बजेबाट सुरु हुनेछ। सभाले गत...